अध्यक्षका उमेद्वार कार्कीको घोषणा— अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि व्यक्तिगत सुविधा लिने छैन, सबैलाई मिलाएर लाने क्षमता छ मसँग
कार्कीको पक्षमा देशव्यापी माहोल बन्दै
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरुको एक मात्र साझा संगठन त्रिवि कर्मचारी संघ एघारौं निर्वाचनमा जुटेको छ । निवार्चन आगामि फागुन ५ मा हुने छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा (नेकपा) एमाले निकट त्रिवि प्रगतिशिल कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट त्रिवि प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र विप्लब माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपालका उमेद्वार रहेका छन् ।
यता त्रिवि कर्मचारीको आधिकारिक संघको निर्वाचनमा होमियको बेला त्रिवि प्रगतिशिल कर्मचारी संगठनका तर्फबाट छत्रबहादुर कार्कीले नेतृत्व गर्दै उमेद्वार दिएका छन् । कार्कीसंग आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्माण सञ्चारले कुराकानी–
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको निर्वाचनमा उमेद्वार बन्नु भएछ । तपाईको उमेद्वारी के का लागि हो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै विवेकशील साथीहरुलाई थाहा छ, जतिबेला त्रिविमा प्रगतिशील समुहले जितेको छ, त्यति बेला आमकर्मचारीका पक्षमा काम भएका छन् ।
त्यति बेला विश्वविद्यालयको सुधार र पेशागत सुरक्षाका कामहरु भएका छन् । यसपटकपनि हामी विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, सेवा सुरक्षा र पेशागतमागहरु लिएर नै चुनावी मैदानमा छौं ।
लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई प्रकृया पुर्याएर स्थायी गराउनु पर्ने छ । विज्ञापन, सरुवा, बढुवालाई वैज्ञानिक बनाउनु परेको छ ।
प्रशासनिक सुधार, सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर मात्रै विश्वविद्यालयको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कर्मचारीहरुकोे सेवा, सुरक्षाको ग्यारेण्टी, समयबद्ध पदोन्नती हाम्रो मुल मुद्दा हो ।
त्यस्तै पेशामा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकासकालागि ज्ञान, सिप र तालिमकाअवसर दिलाउनु, सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सदस्यबन्ने, चुन्ने र चुनिने अवसर दिलाउनु, श्रेणीविहीन स्तरका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, स्थायित्वलाई नियमित गर्दै ठेक्का करारबाट कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यगर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मुद्धाहरु हामीले उठाएका छौं ।
वर्तमानअवस्थामा यस क्षेत्रको पेशागतआन्दोलनमा देखिएको अराजकतावाद, अवसरवाद र अर्थवादबाट जोगाउनु पर्ने चुनौती छ ।
आम साथीहरुको सुनिश्चित भविश्य निर्माणमा सहयोगी बन्नकर्मचारी संघलाई नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ संचालनगर्न यस पटकको निर्वाचनमा आमकर्मचारीहरुले प्रगतिशील प्यानललाई जिताउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
मनोनयनदर्ता गरेपछि केही प्रचार सामग्री तयारी गर्ने काम सकिएको छ । निर्वाचन परिचालन गर्न विभिन्न समितिहरु सक्रिय छन् ।
देशभरीका साथीहरु नयाँ उत्साहका साथलागिरहनु भएको छ । सबै साथीहरुको सक्रियता हेर्दा निर्वाचन कार्यक्रम हाम्रो पक्षमा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
त्रिवि कर्मचारी संघको विगत बताइदिनुहोस् न ?
२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप त्रिवि कर्मचारी संघको स्थापना भएको हो । यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारीहरुको एकमात्र साझा संगठन हो ।
यसमा देशभरीका सबै कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष प्रणाली मार्फत् आफ्नो नेताचुन्ने अवसर पाउछन् । यसको प्रतिनिधी विश्वविद्यालय सभाको सदस्य हुने व्यवस्था त्रिवि ऐनमा छ ।
संघले विश्व विद्यालयका आमकर्मचारीहरुको हितमा विभिन्न काम गर्दै आएको छ । विगत हेर्दा जब जब संघको नेतृत्व प्रगतिशील समुहले जितेको छ, आम कर्मचारीहरुको पक्षमा काम भएको इतिहास छ ।
यो भन्दा अघिको कर्मचारी संघको नेतृत्वपनि तपाईहरु कै थियो ? त्यति वेला यी काम गर्न किन सकिएन ?
यसभन्दा अघि प्रगतिशील समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको कुबेर केसीको नेतृत्वमा कर्मचारी संघ जितेका थियौं । त्यो अवधिमा विश्वविद्यालय र आम कर्मचारीहरुको हितमा थुप्रै कामभएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि उठाइएका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई कार्यालय सहायकसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था, शिक्षण अस्पतालमा सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, एमविविएसलगायत सबै अध्ययन संस्थानमा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीलाई कोटाको व्यवस्था, कर्मचारीहरुलाई कार्य विवरणको व्यवस्था जस्ता मागहरु पूरा गरिएका छन् ।
त्यस वाहेक सेवा, समुहको गठन, विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट अस्थायी, करारमा रहेकाकर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउने व्यवस्था, सबैभन्दा ठूलो संख्यामाखुला, आन्तरिक बढुवामा विज्ञापन, सेवाप्रवेश तालिम, प्रशासनिक अभिवृद्धि भत्तामा वृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएका छन् ।
कतिपय मागहरु पछिल्लो त्रिवि सभाबाट पुरा भएका नीतिगत मागहरु पनि छन् । तीमागहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको लागिपनि हाम्रो जीत आवश्यकभएको छ ।
तपाईका प्रतिस्पर्धी संगठनहरु भन्दा तपाईको प्यानल के कुरामा भिन्न छ ?
हाम्रो मूख्य प्रतिस्पर्धी संगठन भनेको त्रिवि प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ हो । उक्त संघसंग कुनै मुद्धै हुदैन । भए नभएका गफगर्दै हिड्नुभएको छ उहाँहरु । हाम्रा प्रतिस्पर्धीको अवस्था के छ भने त्रिभुवनविश्वविद्यालय सभाले निर्णय गरिसकेका कुराहरु पनि घोषणापत्रमा अब पूरा गर्नुपर्ने मागहरु भनेर राख्नु भएको छ । उनीहरुको मुद्दामा कर्मचारीहरुको चासै नभएको देखिन्छ ।
अर्को संगठन भनेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन हो । यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा हामी उहाँहरु संग एकै प्यानलमा थियौं । एक कार्यकाल उहाँहरुसगै काम गर्याै हामीले । हामी फेरी पनि मिलेर जाने कुरा थियो तर उहाँहरु भड्किनुभयो । उहाँहरु मुद्धा र मतको हिसावले हाम्रो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नुहुन्न । ‘विश्वविद्यालय जोगाऔं’ भन्ने मूलनाराका साथ हामी चुनावी मैदानमा छौं ।
हाम्रा मुद्धाहरु के के हुन् मात्र भनेका छैनौं, हरेक मुद्धाहरु पूरा गराउने कार्ययोजना के हो भन्ने सम्मका कुरा आममतदाताहरुलाई स्पष्ट गरेका छौं ।
कर्मचारीहरुको नेता बन्ने, सुविधा प्राप्त हुने ठाँउमा सरुवा हुने, आफू मात्र बढुवा हुने, आर्थिक लाभप्राप्त हुने काममा मात्र लाग्छन् भन्ने आरोप छ नी ? तपाईको विचार के छ ?
त्रिवि कर्मचारी संघका नेताहरुको बारेमा कर्मचारीहरुको धारणा पाइन्छ । तर हामीमा त्यो लागू भएको छैन । म आफै पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कामगर्दा गर्दै शंकरदेव क्याम्पसमा सरुवा भई आएको हो ।
त्यस बाहेक हाल केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छु । यस भन्दा अघिका संघका अध्यक्षकुवेर केसी अध्यक्ष भएकै अवस्थामा उपप्रशासकको लिखितमा पास भई सकेपछि पनि अन्तर्वार्तामा सफलहुन सक्नुभएन ।
अरु विभिन्न संगठनका नेताहरुको कारण कर्मचारी संघका नेताहरुको सम्बन्धमा यस्तो धारणा बनेको हाम्रो विचार छ । यससगै मेरो प्रतिद्धता के पनि हो भने म अध्यक्षमा निर्वाचन भएपछि व्यक्तिगत सुविधा लिने छैन र कसैलाई अनावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन लाग्ने छैन ।
त्यस बाहेक यो कार्यकाल भरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीयकार्यालयमा बस्ने प्रतिवद्धता तपाई मार्फत् सबैलाई व्यक्तगर्न चाहन्छु ।
सबै पक्षलाई समेट्न सक्नु हुन्न भन्ने आशंका छ नि ?
हामी नेतृत्वमा भएका बेला सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने गरेका छौं । हामी चुनावसम्म त विभिन्न संगठनको नाममा चुनाव लड्छौं, तर चुनाव सकिएपछि सबैलाई मिलाएर लैजाने गरेका छौं ।
यस अघिको नेतृत्वले पनि सबैलाई समेटेर काम गरेको हो । हरेक मुद्धामा हामी सबैलाई साथ लिएर हिड्ने गरेको अनुभव छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव केही पर्ला ? अवस्य पर्छ ।
यतिखेर मुलुक जसरी तरल राजनैतिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । त्यसरी नै त्रिवि पनि गन्तव्यहीन, दिशाहीन अवस्थामा रुमलिरहेको छ । मुलुकको स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई जोगाउदै जनसरोकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा भइरहेको राष्ट्रवादी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउछौं ।
जनताहरु एक भइरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय भित्रपनि सोहीविचारको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरुलाई आम कर्मचारीहरुले साथ दिने कुरामा दुई मत छैन ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर घट्दै जाने, तपाईहरुको राजनीति फस्टाउँदै जाने, तपाईको धारणा के छ ?
विश्वविद्यालयमा राजनीति कसले गरेका छ भन्ने जगजाहेर छ । पदाधिकारीहरु भागबण्डामा नियुक्त भएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । तल्लातल्लातहमा समेत भागबण्डा गरिएको छ ।
राजनीति पदाधिकारीले गर्ने राजनीती गरेको आरोप हामीलाई लगाउने काम भएको छ । विश्वविद्यालयको गुणस्तर घट्नुमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुको दिशाहीनता र अकर्मण्यताका कारणले हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।
त्यसैलाई चिर्नको लागि नै विश्वविद्यालयको समग्र विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना सहितका स्पष्ट मुद्दाहरु उठाएका छौं ।
हाम्रा मुद्दाहरु लागू गराएर विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहने प्रण गर्दछौं ।
बुधबार, २६ माघ, ०७३